Horudhac: Everton vs Liverpool… (Rikoorka ay Reds caawa u dhigi karto taariikhda kubadda cagta) – Gool FM
(Liverpool) 01 Dis 2021. Kulanka xiisaha xambaarsan ee Merseyside Derby ayaa caawa laga ciyaari doonaa horyaalka Premier League iyadoo kooxda Everton ay caawa marti gelineys dhiggeeda Liverpool.
Toffies ayaa booska 14-aad kaga jirta kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo leh 15 dhibcood halka Reds ay booska saddexaad kula jirto 28 dhibcood.
Naadiga Everton ayaa dib usoo dhoweyneysa weeraryahankeeda Richarlison balse taas baddelkeeda waxaa ciyaartan seegi doona Yerry Mina iyo Dominic Calvert-Lewin kuwaasoo diiwanka dhaawacyada ku wehlin doona Tom Davies, si kastaba ha ahaatee, waxaa tababarka kusoo laabtay Andre Gomes.
Dhinaca kale, Liverpool ayaanan wajaheyn dhaawacyo cusub, waxaase kulanka Goodison Park ka maqnaan doona Roberto Firmino, Naby Keita, Joe Gomez iyo Curtis Jones.
Kaddib guushii ugu dambeysay ee ay Everton kaga gaartay Liverpool horyaalka bishii February ee sanadkan ayaa ka dhigan inay Toffies raadineyso inay labo guul oo xiriir ah ka gaarto Reds markii ugu horreysay tan iyo 1985.
Kulanka loo yaqaano Merseyside Derby ayaa laga dhaliyay goolasha ugu badan daqiiqadaha lagu daray ciyaarta la helo in ka badan is-aragyada kale ee Premier League, waxaana dhammaantood goolashaas dhaliyay kooxda Liverpool: Ronny Rosenthal (1993), Gary McAllister (2001), Dirk Kuyt (2007), Sadio Mane (2016) iyo Divock Origi (2018).
Rafa Benitez ayaa wajahay kooxdiisii hore ee Liverpool isagoo hoggaanka u hayay kooxda Reds 350 kulan oo tartan rasmi ah, waxaana uu kula guuleystay tartammada Champions League 2004-05, UEFA Super Cup 2005 iyo FA Cup 2005-06.
Liverpool ayaa noqotay kooxda kaliya ee kubadda cagta taariikhdeeda ugu yaraan labo gool dhalisay 17 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, waxayna barbarreysay Sunderland oo rikoorkaas dhigtay 1927, waxayna caawa fursad u heysataa inay rikoor cusub u dhigto kubadda cagta.
19-ka gool ee uu Mohamed Salah ku lug yeeshay horyaalka (11 gool iyo siddeed caawin) ayaa ka dhigtay xiddiga Masaarida midka goolasha ugu badan ka qayb qaatay guud ahaan shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub.
Horudhac: Real Madrid vs Athletic Club... (Miyuu Eden Hazard ciyaari doonaa?)